Maanso: Ramadaan dhamaataye (Waxaa tiriyey Abwaan Axmed Cali Aadan).
Maanso: Ramadaan dhamaataye (Waxaa tiriyey Abwaan Axmed Cali Aadan).
Thursday June 22, 2017 - 19:53:06 in by Samiir Cabdi
Maanso: Ramadaan dhamaataye (Waxaa tiriyey Abwaan Axmed Cali Aadan). Maansadan aadka u quruxda badan waxaa Tiriyay Abwaan Axmed Cali Aadan.Runtii waxa ay maansadani ka turjumaysaa duco iyo Rabbi tuug ku saabsan, in aan Ilahay ac­maasheenii Ramadaanka aanu hoojin inagana aqbalao. Waatan Maansadii Rabadaan dhamaataye: Cirkan aan dhaqaaq’iyo Soo dhicid midna lahayn Misna udub dhaxaadiyo aan dhiga hayaa jirin Allii sare u dhaabaw Rabadaan dhamaataye Danbi dhaaf Nasiiyeey. dhulkan aan dhaqaaq’iyo dheeldheeliga lahayn Allii buura dhaadheer Hoos ugu dhardhaaree dhidibada uga yeelaw Rabadaan dhamaataye danbi dhaaf Nasii’yeey.
Allihii dhabada baray Qoraxdaa mar soo dhalan Marna sii dhacaysee Habeenkiyo dharaartii Sababta uga dhigayaw Rabadaan dhamaataye Danbi dhaaf Nasii’yeey. Biyo qaybi dhay tahay Qaybina dhanaan tahay Misna dhaam ku wada jira Allii teed u kala dhigay Aanay dhaafi karinaw Rabadaan dhamaataye Danbi dhaaf Nasii’yeey. Allahaan wax dhalinee Isna aan la dhalinee dhigga aan lahaynaw Rabadaan dhamaatye Danbi dhaaf Nasii’yeey. Allii Aadam dhoobada Dhulka uga xantoobshee Bashar siman ka dhigayaw
Rabadaan dhamaataye Danbi dhaaf Nasii’yeey. Waaga dhalashadiisiyo Ilamaa cadceed dha’ca Cunno gaws la dhiga iyo Cabbitaan dhamaantii Allahaanu dhuuniga Uga dhaarsanaynaw Rabadaan dhamaataye Danbi dhaaf Nasii’yeey. Saqda dhexe habeenkii Qiyaam dhuuxu gororiyo Rukuuc dhabarku daaliyo Sujuud food la dhiga iyo Allahaan dhamaantayo Baryo ugu dhaqaaqnee Gacmaa hoos dhigaynaw Rabadaan dhamaataye Danbi dhaaf Nasii’yeey. Rabadaan dhamaataye Kawaad naarta dhababiyo Rabbaw dhacan ka saareed
Waxay kaa dhursugayaan U dhabayso naga yeel. Rabbiyaw dhamaantayo Camalkay dhitays’teen Kuwaan laad ku dhufanee Dhan kastaba cibaadada Kuugu dhaga nuglaadee Shaydaan dhufays adag Kaga dhuunta naga yeel.) Aamiin aamiin aamiin aamiin. Maansada waxaa tiriyay Abwaan :Axmed Cali Aadan.